Nhau - Mu "kukwira kwemitengo" kwemakore maviri apfuura, mazhinji madiki nepakati nepakati ……
Mu "kukwira kwemitengo" yemakore maviri apfuura, mazhinji emabhizimusi madiki nepakati akange asingakwanise kumira kumanikidza uku uye zvakabviswa zvishoma nezvishoma nemusika. Zvichienzaniswa nedambudziko rakatarisana nemabhizinesi madiki nepakati nepakati, makuru mabhizinesi ane zvigadzirwa zvehunyanzvi ane pesvedzero shoma. Kune rimwe divi, nekuda kwekuda kukuru kwezvigadzirwa kubva kumakambani makuru, zvigadzirwa zvemakambani makuru zvinowanzoshandisa ramangwana. Hunhu hwekushambadzira kweramangwana hunoita kuti makambani makuru atenge zvinhu zvakasvibirira 'zvakagadziriswa mbichana mumwedzi mishoma inotevera mutengo usati wawedzera, izvo zvinoderedza zvakanyanya kukanganisa kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvisina kugadzirwa pamakambani. Kune rimwe divi, makambani makuru anovimba nePamberi tekinoroji uye yepamusoro-magumo ekugadzira kudzora iwo epakati-kusvika-epamusoro-magumo musika. Iko kuwedzerwa kukosha kwezvigadzirwa kwakakwira, uye kugona kumira nenjodzi yekukwira kwemitengo yezvinhu zvakasikwa pasina mubvunzo kwakasimba.
Uye zvakare, pasi pekukwikwidzana kwemakwikwi akazara emusika uye kumanikidzwa kwezvakatipoteredza, kugona kumashure kwekugadzira kugona kwakadzora zvishoma nezvishoma, izvo zvakasimudzira kusimudzira kwetekinoroji indasitiri, indasitiri yeshangu yadzokera munzira chaiyo, uye chikamu chemusika chemakambani anotungamira. muindasitiri yakawedzera kuwedzera. Mune ramangwana, nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwemusika musika, mhando uye nhanho yeiyo Jinjiang shangu indasitiri cheni ichaunza mamiriro akanaka, kugadzirwa kunowedzera kuwedzera, uye musika unodzikama.
Muchokwadi, pamusoro peaya mahombekombe mahombekiti mumusika, mamwe makambani ekucheka-epamberi akatoita kubudirira mukugadzirwa kwehungwaru kwehembe. Semuenzaniso, chipfeko chemukati chemukati "Jiaoyi" chinogadzirisazve cheni yekupa zvipfeko kuburikidza nedata hombe uye nehungwaru kugadzirwa kuti uwane huwandu hwepamusoro uye hwakaderera mutengo Iko kuverenga kunotove padyo ne zero. Xindong Technology yakavambwa muna 2018. An Ultra-chaiyo 3D dhijitari yekufananidza tekinoroji yakagadzirwa mukubatana neChina Textile Information Center inobvumira machira kutora mukana weiyo tekinoroji yedhijitari, kubatsira makambani kukurumidza kugadzirisa chigadzirwa kuratidza uye zero-mutengo pre-kutengesa, uye kudzikisa machira 50% yekutsvagisa uye mari yekusimudzira uye 70% yemari yekushambadzira yevagadziri uye varidzi vezviratidzo vakapfupisa kutenderera kutenderera ne
Zvipfeko zvekutengesa kunze kwenyika zvave panzvimbo yekutengesa, kutengesa kushambadzira + kutonhora kwechando kubatsira kupfeka kushandiswa
Yakabatwa nedenda muhafu yekutanga yegore, inopfuura makumi masere muzana emari yemakambani epfeko mbatya yakaderera, izvo zvakakanganisa zvakanyanya budiriro yeindasitiri. Sekureva kwedata kubva ku Ministry of Industry and Information Technology, muna Nyamavhuvhu, mbatya dzinotengeswa kunze kwenyika dzakawedzera ne3.2% gore-ne-gore, yaive nguva yekutanga kuti kukura kwemwedzi kwakanaka kwakatangazve mushure memwedzi minomwe yekukura kwakashata mukati megore.
MunaGunyana, iyo 2020 Nyika "Yekushandisa Ekusimudzira Mwedzi" zviitiko zvakarongedzwa ne Ministry of Commerce neCentral Radio, Firimu neTerevhizheni Chiteshi uye ye "Gumi neimwe" yezororo remhemberero yakave nekuwedzera kwakakosha kune yekushongedza neyemachira indasitiri. Inotevera "Double Gumi nerimwe" uye "Dhimba gumi nemaviri - mabasa ekusimudzira acharamba achiwedzera kudyiwa kwemachira nembatya. Uye zvakare, iyo China Meteorological Administration yakataura muna Gumiguru 5 kuti chiitiko cheLa Niña chinotarisirwa kuitika munguva ino yechando, zvinoreva chiitiko chemvura inotonhorera ine anomaliesea tembiricha yepasirese mukatikati meEquator uye kumabvazuva kwePacific uye yasvika padanho simba uye nguva. Mamiriro ekunze anotonhora zvakanyanya munguva ino yechando akakurudzira kudyiwa kwehembe dzechando.
Insole Bhodhi NaEva, Tsono Punch Nonwoven Mucheka, Pepa Insole Bhodhi NaEva, Isina kurukwa Mucheka NaEva, Yakasarudzika Mucheka Laminated Na Eva Foam, Shangu Insole Chinyorwa Sheet,